Dugsiyada, waxbarashada - Örnsköldsviks kommun
- Dugsiyada, waxbarashada
Maamulka degmada qeybta waxbarashada baa mas’uul ka ah dhammaan waxbarashooyinka dugsiyada, laga soo bilaabo dugsiga xannaanada ilaa waxbarashada dadka weeyn. Waxaa xitaa jiro dugsiyo ka madax bannaan degmada oo laga soo bilaabo dugsiga xannaanada ilaa dugsiga sare.
Dugsiga xannaanada waxaa dhigto carruurta ugu da’da yar oo waxey ka qeyb-qaataan meherada waxbarasho oo waxaa hoggaaminaayo shaqaalo waxbarasho soo dhigtay. Dugsiga xannaanada wuxuu lee yahay manhajka waxbarashada mid u qaas ah.
Carruurta jiro 1 ilaa 5 sano waxey xaq u lee yahiin boos iney ka helaan dugsiga xannaanada haddii waalidka ey shaqeynaayaan ama ey waxbarasho dhiganaayaan. Haddii waalidka shaqo fasax ka yahay uu canug hada dhashay caruurta ka weeyn waxey xaq u lee yahiin iney dhigtaan dugsiga xannaanada 15 saac isbuuckasto. Waa sida oo kale haddii waalidka ey yahiin shaqo la’aan.
Waalidka shaqeeyo ama waxbarasho aado waa iney iska bixiyaan qarashka booska. Qarashka intuu noqonaayo markii la xisaabinaayo waxaa la fiirin labada waalid dhaqliga soo galo.
Dhammaan carruurta jiro 3 ilaa 5 sano waxey xaq u lee yahiin 15 saac isbuuci, oo dugsiga xannaanada guud, oo ku ma xirna haddii ey waalidka shaqeynaayaan ama eysan shaqeyneeyn. Dugsiga xannaanada guud waxaa la helaa 1 sebtember ilaa 31 meey.
Dugsiyada xannaanada waa laga helaa magaalooyin badan. Waxaa jiro dugsi xannaano oo u furan carruurta oo waalidkood shaqeeyaan habeenada iyo maalmaha fasaxa.
Haddii aad dooneysid inaad soo dalbatid boos oo dugsiga xannaanada waxaad soo codsankartaa boos adigoo isticmaalaayo adeega elektroniga oo bogga internetka oo degmada (foomka wuxuu ku qoran yahay iswiidhish). Adiga waxaa xitaa soo wici kartaa lambarka guud oo degmada 0660 – 880 00 oo waxaa markaas xiriir la yeelan shaqaalaha oo codsiga kaa qaban karo.
Soo codso booska afar bilood ka hore waqtiga aad u baahantahay.
Fasalka ardeyda lix sano jirka
Sanadka canuga buuxinaayo 6 sano degmada waxey u soo diri waalidka martiqaad inuu canuga bilaabikaro fasalka ardeyda lix sano jirka. Fasalka ardeyda lix sano jirka waa loo madax bannaan yahay iyo ujeedada waxey tahay in canuga waxbarashada soo socoto loo sii xiiso galiyo iyo aasaasi wanaagsan la siiyo siduu ula soconkaro waxbarashada dugsiga oo soo socoto.
Iswiidhan waa in dhammaan carruurta ey bilaabaan dugsiga aasaasiga sanadka ey buuxinaayaan 7 sano. Dugsiga aasaasiga waxaa la dhigtaa sagaal sano iyo waa qasab inuu canuga dhigto dugsiga ilaa canuga uu ka gaaraayo 16 sano. Dhammaan carruurta u diwaangalisan tahay iney ku nool yahiin degmada waxaa loo soo diri canuga ballan oo inuu bilaabaayaan dugsiga sanadka uu buuxinaayo 7 sano. Haddii waalidka eysan dalbasho qaas ah eysan soo suubsan canuga waxaa boos laga siin dugsiga oo gurigiisa u dhaw.
Haddii aad u soo guurtid degmada oo kula socdo canug oo da dugsi waxaa la xiriiri maamulka dugsiga xaafada aad u soo guurtay ku yaal. Haddii aadan ogeyn xaafadaada dugsiyada kamid ah, la soo xiriir lambarka guud oo degmada
0660-880 00 si oo markaas laguu caawiyo.
Dugsiga xilliga firaaqada
Dugsiga xilliga firaaqada waxaa loogu talagalay carruurta jiro 6 ilaa 13 sano. Waa kuwa u baahan in laga warhaayo ineysan xisada dugsiga bilaaban iyo markey xisadaha dhammaadan. Shaqaalo waxbarasho soo dhigtay baa meheradaas isku daba ridaayo sida ku qoran manhajka waxbarashada. Dugsiga xilliga firaaqada badanaa wuxuu dhowyahay ama ku yaal dugsiga. Waalidka baa iska bixinaayo qarashka booska oo dugsiga xilliga firaaqada.
Booska dugsiga xilliga firaaqada waxaa laga soo dalbankara foomka laga helaayo bogga internetka oo degmada(foomka wuxuu ku qoran yahay iswiidhish). Adiga waxaa xitaa soo wici kartaa lambarka guud oo degmada 0660 – 880 00 oo waxaa markaas xiriir la yeelan shaqaalaha oo codsiga kaa qaban karo.
Dugsiga dhaqanka iyo dugsiga farsamada
Degmada waxaa laga helaa dugsiga dhaqanka iyo dugsiga farsamada oo ma’ahan waxbarasho qasab oo waa meherad ardeyga u madax bannaan yahay oo ardeyga soo dalbankaro siduu ka qeyb-qaato saacadaha oo dugsiga la dhigto.
Dusiga aasaasiga ardeyda oo aqligooda gaabiyo
Ardeyda oo caawinaada dheerida u baahan sidey waxbarashada dugsiga uga qeyb-qaadankaran waa iney gacanta koowad ka helaan dugsiga ugu dhow gurigooda. Ardeyda curyaanimo ballaaran haysato waxaa, waa markii baaritaan la suubiyo kadib iyo waalidka soo codsataan, boos laga siin kara dugsiga aasaasiga ardeyda oo aqligooda gaabiyo. Waxaa sabab u ahaan karo daawooyin, cilmi nafsi, waxbarasho ahaan ama wax la qeybsiga bulshada, in loo baahdo booska dugsiga aasaasiga ardeyda oo aqligooda gaabiyo, oo markaasna la qiimeyay in ardeyga arrintaan horumar gaariineyso iyo wax uu ku baran karo.
Dugsiga sare waa waxbarasho loo madax bannaan yahay laakin dhallinyarada weey dalbadaan iney waxbarashada sii wataan markey ka baxaan dugsiga aasaasiga. Waxbarashada dugsiga sare ardeyga waxey u diyaarin waxbarashada jaamacada iyo badanaa waa laga maarmaan markii laga mid noqonaayo suuqa shaqada.
Waxbarashada dugsiga sare waa saddax sano. Waxbarashada waxey kala leedahay qeyb aqoon ahaan loo baranaayo iyo qeyb ficil ahaan loo baranaayo. Dugisga sare oo isboortiga[Idrottgymnasiet] waxaa dhigto ardeyda doonaayo iney isboortiyada laacib ku noqdaan, oo helaayo fursad ey isboortiga ku tababartaan ayagoo isla markaas waxbarashadooda dhiganaayo. Degmada Örnsköldsvik dugsiga sare wuxuu ka koobanyahay dugsiga Parkskolan iyo Nolaskolan.
Campus Örnsköldsvik waxaa ka heli dhowr waxbarasho oo shaqo, dhowr waxbarasho oo jaamacadeed iyo cilmi baaritaanta oo kala wada shaqeyno jaamacada Umeå. Waxaa kale oo xitaa jiro fursado oo dugsiyo koorsooyinkooda ka qeyb-qaadankartid adigoo gurigaada joogo.
Campus waxaa laga heli dhex bartamaha Örnsköldsvik, oo wuxuu u dhaw yahay meesha basaska iyo tareemada. Ardeyda jaamacada waa la hubaa iney helaayaan guri laakin waa iney iska bixiyaan ayaga qarashka kirada.
Waxbarashada dadka weeyn iyo qiimeynta aqoonta
Dadka weeyn oo heysan aqoon u dhigmato dugsiga aasaasiga ama dugsiga sare waxey haystaan fursad ey waxbarashadooda ku dhameystiran karan. Qofka u diwaangalisantahay inuu ku nool yahay Örnsköldsvik wuxuu xaq u lee yahay waxbarashada dadka weeyn inuu soo dalban karo dayrta sanadka uu buuxinaayo 20 sano. Waxbarashada oo dugsiga aasaasiga waa bilaash. Waxbarashada dugsiga sare waa inuu qofka asaga iibsadaa buugaga waxbarashada.
Qofkii wadan kale nidaamkeeda wax ku soo bartay, ama si kale, aqoon ku soo yeeshay, wuxuu haystaa fursad oo aqoontiisa loogu qiimeynkaro. Markii loo qiimeeyo kadib qofka waa la siin shahaado aqoontiisa caddeyneyso. La soo xiriir waxbarashada dadka weeyn: 0660-889 00.
Barashada iswiidhishka dadka ajnabiga (sfi)
Waxbarashada dadka weeyn waxey xitaa bixisaa barashada luqada iswiidhishka dadka ajnabiga (sfi) oo dadka aanan aqoon luqada iswiidhishka. Waxbarashadaas waxey xitaa qofka aqoon ka siin wadanka iyo nolosha suuqa shaqada.
Waxbarashada iswiidhishka dadka ajnabiga waxaa dhigan karo qofkii jiro ugu yaran 16 sano, u diwaangalisan tahay inuu degmada ku noolyahay iyo haysto lambarka aqoonsiga oo dhameystiran. Barashada iswiidhishka iyo in waxbarasho kale, shaqo ama tababar shaqo oo la isla suubiyo waa suurtagal. Waxbarashada waa bilaash.
Haddii aad dooneysid inaad warbixin kale ka sii heshid barashada iswiidhishka dadka ajnabiga, la soo xiriir shaqaalaha talo bixinta oo waxbarashada dadka weeyn: 0660-889 88.
Kaalmeenta luqada oo dugsiga xannaanada iyo dugsiga aasaasiga